Umbhali we-Ghostwriter, umhleli we-Qt5 weMarkdown ohlaziyiweyo kuhlobo lwe-2.0.0 | Ubunlog
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga kwi-Ghostwriter. Yi le umhleli weMarkdown esinokuyisebenzisa kuzo zombini i-Gnu / Linux kunye neWindows. Esi sicelo siza kubonelela umsebenzisi ngendawo yokubhala ekhululekile ngaphandle kweziphazamiso.
Umbhali wesiporho, ngumhleli weQt5 Markdown ehlaziyiweyo kuhlobo lwe-2.0.0. Inguqulelo entsha iza nomxholo ohlaziyiweyo kunye nomnikezeli omtsha weMarkdown. Isicelo inikeza ujongano olucocekileyo lokufumana amava ngaphandle kokuphazamiseka. Iya kusivumela ukuba sikhubaze ngokulula ibha esecaleni, yiya kwiscreen esigcweleyo kwaye ubonise umbono wokuqala we-HTML.
Umbhali-moya Inenkxaso eyakhelwe-ngaphakathi ye-cmark-gfm processor. Nangona kunjalo, inokuzibona ngokuzenzekelayo i-Pandoc, i-MultiMarkdown okanye i-cmark processors. Kuya kufuneka kuphela ukufakela nayiphi na kwezi processor kwaye uqinisekise ukuba indawo zabo zokufaka zongezwa kwinkqubo yendlela ye-PATH eyahlukileyo.
Le nkqubo iya kuthi ibhaqe ngokuzenzekelayo ukufakwa kwayo kwisiqalo, inike umsebenzisi imbonakalo yangaphambili ye-HTML kunye nokukhethwa kokuthumela ngaphandle ngokufanelekileyo.
1 Iimpawu ngokubanzi zeGhostWriter
2 Ukufakwa kwesiporho ku-Ubuntu
Iimpawu ngokubanzi zeGhostWriter
Yiyo Inkqubo yasimahla nevulekileyo. Le software isasazwa phantsi kwe-GNU General Public License v3.0.
Sinokonwabela amava ukubhala ngaphandle kweziphazamiso.
Siza kuba nemowudi yokugxila. Ngokucofa iqhosha 'Gxi ninisakwikona esezantsi esekunene yomhleli, le ndlela iya kwenziwa kwaye iya kugqamisa kuphela isicatshulwa sangoku esijikeleze isikhombisi, ngelixa siphela eshiyekileyo.
Ukuba ulibele nasiphi na isichazi seMarkdown, Kufuneka ucofe iqhosha kuphela F1 ukuzisa iphepha lokukopela kwibar esecaleni.
Ungafumana Ukujonga kwangaphambili koxwebhu kwi-HTML. Ngomboniso wokuqala, unokukopa i-HTML ukuyinamathisela kwibhlog yethu okanye ukuyithumela kwelinye ifomathi.
Ibha yecala yokubhala yesiporho ibonelela nge ulwandlalo loxwebhu eya kusivumela ukuba sikhangele kulo naliphi na icandelo leli, ngonqakrazo olunye lwe mouse.
Ukongeza ukubonisa ubalo lwamagama aphilayo emazantsi efestile, Umbhali weghhostwrit ubonakalisa ngakumbi izibalo ezibukhoma kwibar esecaleni.
Inkqubo iya kusinika ithuba lokuba thumela ngaphandle kwiifomathi ezininzi.
Imowudi yeHemingway. Olu khetho luya kusivumela ukuba sikuphephe ukuhlela ngelixa sibhala, kuba ikhubaza i-backspace kunye nokucima ukhetho, ukudala amava afana nalawo wokubhala.
Los eyakhelwe-ngaphakathi ekukhanyeni kunye nemixholo emnyama bonelela ngobuhle bobugcisa obungaphandle kwebhokisi amava okubhala. Ukuhamba nolu tshintsho, iqhosha elitsha longeziwe kwibar yomgangatho, ukuvumela abasebenzisi ukuba batshintshele kwimowudi yokukhanya okanye emnyama. Ukuba oku akwanelanga, unokwenza umxholo wakho.
Siza kukwazi yenza ngokulula ii-urls zomfanekiso ngaphakathi kuxwebhu lwethu lokuphawula, ngokutsala kwaye ulahle umfanekiso kwiprojekthi.
Sebenzisa i-Ghostwriter, abasebenzisi baya kufumana Inkxaso yeMathJax , eya kuthi ivumele nabani na ofuna ukubhala ii-equations, kwaye athumele kwi-HTML.
Akhawunti ukhetho lokugcina ngokuzenzekelayo.
Ezi zezinye zeempawu. Banga Nxibelelana nazo zonke ngokweenkcukacha ukusuka kwi iwebhusayithi yeprojekthi.
Ukufakwa kwesiporho ku-Ubuntu
Kulo Iphepha lokukhuphela yeprojekthi bonisa ukuba Ubuntu, sinako Sebenzisa iPPA yakho ukufaka ingxelo ezinzileyo yenkqubo. Ukongeza indawo yokugcina izinto, kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T) kufuneka sibhale nje umyalelo:
Emva kohlaziyo lwesoftware olukhoyo, unako faka inkqubo ngalo myalelo:
Nje ukuba ukufakwa kugqityiwe, sinayo kuphela fumana isiqalisi senkqubo kwiqela lethu.
Ukususa le nkqubo kwinkqubo yethu, sinako qala ngokususa iPPA. Siza kuyiphumeza le nto ngokuvula i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye sichwetheze umyalelo:
sudo add-apt-repository -r ppa:wereturtle/ppa
Emva komyalelo wangaphambili, uhlala kuphela cima inkqubo yenkqubo yethu. Kwisiphelo esinye, imiyalelo oyisebenzisayo iya kuba:
sudo apt remove ghostwriter; sudo apt autoremove
Ngolwazi oluthe kratya malunga nale nkqubo, abasebenzisi bangaya kwifayile ye- iwebhusayithi yeprojekthi, ukuya kuyo Indawo yokugcina kwiGitHub okanye yakhe wiki ekuhlaleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Umbhali we-Ghostwriter, umhleli we-Qt5 weMarkdown ohlaziyiweyo kuhlobo lwe-2.0.0
NgePlasma 5.22 beta esele ikho, i-KDE iqala ukusebenza kwiPlasma 5.23, iyaqhubeka nokuphucula iWayland kwaye ilungiselela lonke olu tshintsho
I-KDE Gear 21.04.1, uhlaziyo lwenqaku lokuqala okoko igama latshintshela kwi "Gear" lifika namasiko afanayo